Nhau - Briteni Simbi inotengeswa kuChina Jingye Boka rinopedzisa
Tambo yenguva pfupi
Chain Batanidza Mesh
British Simbi inotengeswa kuChina Jingye Boka rinopedzisa
Mabasa 3,200 ane hunyanzvi hwepamusoro muScunthorpe, Skinningrove uye paTeesside akachengetedzwa nekuzadzikiswa kwechibvumirano chekutengesa British Steel kumutungamiriri wechiChina wekugadzira simbi Jingye Group, hurumende yatambira nhasi.
Kutengesa uku kunotevera hurukuro dzakakura pakati pehurumende, iyo Yekugamuchira Mugamuchiri, maManeja maSpecial, masangano evashandi, vanotengesa uye vashandi. Inoratidzira nhanho yakakosha mukuchengetedza ramangwana renguva refu, rinogadzikana rekugadzira simbi muYorkshire neHumber neNorth East.
Sechikamu chechibvumirano, Jingye Boka rakavimbisa kudyara £ 1,2 bhiriyoni pamusoro pemakore gumi kuti dzigadzirise nzvimbo dzeBritish Simbi uye kusimudzira kushanda nesimba.
Prime Minister Boris Johnson akati:
Kutinhira kweaya masimbi kwakagara kuchinzwika muYorkshire neHumber neNorth East. Nhasi, seBritish Simbi inotora nhanho dzayo pasi pehutungamiriri hwaJingye, tinogona kuva nechokwadi kuti izvi zvicharira kwemakumi emakore anotevera.
Ndinoda kutenda wese weBritish Steel mushandi muScunthorpe, Skinningrove uye paTeesside nekuzvipira kwavo uye kusimba izvo zvakachengetedza bhizinesi richisimukira mugore rapfuura. Chivimbiso chaJingye chekudyara £ 1,2 bhiriyoni mubhizinesi kusimudzira kusingazongochengetedze zviuru zvemabasa, asi kuve nechokwadi cheBritish Steel ichiramba ichibudirira.
Munyori weBhizinesi Alok Sharma ashanyira saiti yeBritish Steel yeScunthorpe nhasi kuzosangana neMukuru weJingye Group, VaLi Huiming, CEO weBritish Steel, Ron Deelen, mumiriri weChinese kuUK, VaLiu Xiaoming nevashandi, vamiririri vemubatanidzwa, vamiriri veparamende nevamiriri. .
Bhizinesi Secretary Alok Sharma akati:
Iko kutengeswa kweBritish Simbi inomiririra yakakosha vhoti yekuvimba muUK indasitiri yesimbi. Inoratidza zvakare kutanga kwenguva nyowani kumatunhu aya akavaka raramo yavo kutenderera kugadzirwa kwesimbi kwemaindasitiri.
Ndinoda kupa ruremekedzo kune wese munhu ave achibatanidzwa mukuwana chibvumirano ichi pamusoro pemutsetse, kunyanya kuvashandi veBritish Steel vandinoona kusava nechokwadi kuchange kuri kunetsa.
Ndinodawo kuvimbisa vashandi veBritish Steel vanogona kunge vakatarisana nekudzikiswa kuti tiri kuunganidza zviwanikwa zvese kuti vape nekukurumidza kutsigira kwepasi uye kuraira kune avo vakakanganiswa.
British Simbi yanga ichishandiswa kuvaka zvese kubva kunhandare dzemitambo kusvika kumabhiriji, makungwa egungwa uye Jodrell Bank yekuongorora nzvimbo.
Iyo kambani yakapinda mukukwereta mari muna Chivabvu 2019 uye zvichitevera kutaurirana kwakazara, iyo Yekugamuchira Mugamuchiri uye maManeja Mamaneja kubva kuErnst & Young (EY) vakatsigira kutengeswa kwakazara kweBritish Steel kuJingye Group - kusanganisira simbi ku Scunthorpe, zvigayo kuSkinningrove uye paTeesside - pamwe nemabhizimusi anobatsira TSP Engineering neFN Steel.
Roy Rickhuss, General Secretary wevashandi vesimbi vashandi 'Community Community, akati:
Nhasi kunoratidza kutanga kwechitsauko chitsva cheBritish Steel. Rwave rwakareba rwendo uye rwakaoma kusvika pano. Kunyanya, kutora uku chiratidzo cheyese kuyedza kwevashandi vepasi rose, avo kunyangwe kuburikidza nekusaziva, vakaputsa zvinyorwa zvekugadzira. Nhasi zvingadai zvisina kugoneka pasina hurumende kuona kukosha kwesimbi seyakakosha hwaro indasitiri. Sarudzo yekutsigira bhizinesi kuburikidza nehuya hutsva muenzaniso weakanaka maindasitiri zano pabasa. Hurumende inokwanisa kuvaka pane izvi nezviito zvakawandisa zvekugadzira nharaunda yakakodzera yekuti vagadziri vedu vesimbi vabudirire.
Tinotarisira kushanda naJingye sezvavanounza zvirongwa zvavo zvekudyara, izvo zvine mukana wekushandura bhizinesi uye kuchengetedza ramangwana rakasimba. Jingye haasi kungotora bhizinesi chete, vari kutora zviuru zvevashandi uye vachipa tariro nyowani kunharaunda dzesimbi muScunthorpe neTeesside. Isu tinoziva kuti kune rimwe basa rakawanda rekuita, zvinonyanya kukosha kutsigira avo vasina kuwana basa nebhizimusi idzva.
Kune vashandi makumi mana nevapfumbamwe vakatarisana nekushomeka sechikamu chekutengesa, hurumende yeRapid Response Service neNational Careers Service yakaunganidzwa kuti ipe pasi rutsigiro nezano. Iri sevhisi rinobatsira avo vakachinjika shanduko kuenda kune rimwe basa kana kutora mikana mitsva yekudzidzira.
Hurumende inoenderera mberi nekutsigira indasitiri yesimbi - inosanganisira mari inodarika mazana matatu emamiriyoni emamiriyoni emamiriyoni emagetsi emagetsi, nhungamiro dzekutenga zvinhu zvevanhu uye ruzivo rwepaipi yesimbi pamapurojekiti ezvivakwa zvepasirese anosvika madhora mazana mashanu emamiriyoni pamakore gumi anotevera.
Post nguva: Jul-08-2020
Suite 1501, New Cooperation Plaza B1, No. 108 Iye Zuo Road, Shijiazhuang, China